onlineakhabar.com: OMG !! अनलाईनबाट खाना अर्डर गर्दा खानासँगै कण्डम भेटेपछि..
Funny News, India News, Indian Woman, International » OMG !! अनलाईनबाट खाना अर्डर गर्दा खानासँगै कण्डम भेटेपछि..
OMG !! अनलाईनबाट खाना अर्डर गर्दा खानासँगै कण्डम भेटेपछि..
भारतको जमशेदपुरमा एक महिलाले अनलाईनमा पनिर चिली अर्डर गरेकी थिइन् । जब उनले खानाको प्याकेट खोलिन त एकछिन अक्क न बक्क भइन् । उसने देखिन पनिर चिलीको साथमा कण्डम पनि थियो। उक्त महिलाले यसबारेमा कम्पनीमा कम्प्लेन गरेकी छन् भने उक्त महिला टाटा स्टील करपोरेटमा अफिसर हुन् ।
अनलाईन खाना सप्लाई गर्ने कम्पनी ग्रेवीकार्ट डट कम का म्यानेजर सुदीप दत्ता भन्छन् कि मैले त्यो फोटो हेरे खानाको साथमा कण्डम कसरी हुन सक्छ । आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन् र खाना सिल्भर कन्टेनरमा प्याक गरिएको थियो । जसमा खाना यति गर्मी हुन्छ कि कण्डम जस्तो कुनै पनि चिज सजिलै पग्लन सक्ने कुरा म्यानेजरले बताएका थिए ।
उक्त महिलाले स्प्रिङ रोल, डोसा र पनिर चिली अर्डर गरेकी थिइन् । ग्रेवीकार्टले साकचीको डोसा र पनिर चिलि बनाएर उक्त महिलाको आवासगृह पठाएको थियो । यसको लागि महिलाले ग्रेवीकार्टको डेलिभरि ब्वाइ रुपेशलाई २०५ भारु भुक्तानी पनि गरेकी थिइन् ।
उक्त महिलाका अनुसार डेलिभरी ब्वाइ खाना दिएर घरबाट बाहिर निस्किएपछि उनेले खानाको प्याकेट खोलिन् । प्याकेटमा पनिर चिलीको साथमा कण्डम थियो । महिलाले तुरुन्त डेलिभरी ब्वाइलाई रोकेर कम्प्लेन गरिन् तब डेलिभरी ब्वाइले यसबारे आफूलाई थाहा नभएको जनाएका थिए । पछि कम्पनिमा कम्प्लेन गरेपछि कम्पनीले उक्त डेलिभरी ब्वाइलाई जागिरबाट निस्काशित गरेको छ ।
Tags : Funny News India News Indian Woman International